Golaha Shacabka oo lagu wado in ay maanta Ansixiyaan Sharci muhiim u ah Wasaaradda Maaliyadda – Kalfadhi
Fadhiga 20aad ee Kalfadhiga 5aad Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in uu maanta ka qabsoomo xarunta fadhiyada Baarlamaanka ee Guriga Umadda.
Ajendaha Kulanka Maanta ee Golaha Shacabka ayaa ah hal qodob oo ah aqrinta 3-aad ee hindise sharciyeedka maamulka maaliyadda,waxaaana kulanka goobjoog ka noqon doona Xubno ka socda Wasaaradda Maaliyadda ee Xukuumadda federaalka Soomaaliya sida ay shaaceyn xubno katirsan Guddoonka Golaha Shacabka.
Fariin loo diray xubnaha Golaha Shacabka ayaa lagu wargeliyay in uu jiro Maanta kulanka Golaha,isla markaana looga baahan yahay inay soo xaadiraan,waqtigana dhamaantood wada ilaaliyaan.
Kulankii ugu dambeeyay ee Isniintii ay yeesheen Xildhibaanada ayaa Aqrinta 1aad waxa ay marsiiyeen wax ka bedelka sharciga Iibka Qaranka, iyada oo xildhibaanada sidoo kale loo qeybiyay sharciga dhismaha guddiga madaxa banaan ee la dagaalanka Musuq maasuqa.
Xildhibaanada Golaha Shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa inta ay ku guda jiraan Kalfadhiga 5aad waxay ansixiyeen Sharciyo badan waxaana weli horyaalla Ajendayaal dhowr ah oo la doonayo in ay meel mariyaan.